Gudoomiyaha maxkamada sare oo u digay dadka Shabaab garsoorka u doonta. – Radio
Gudoomiyaha maxkamada sare oo u digay dadka Shabaab garsoorka u doonta.
December 29, 2018	46	Like
Baashe Yuusuf Axmed gudoomiyaha Maxkamada Sare ee dalka ayaa maanta Muqdisho ka sheegay in Maxkamada Sare ee dalka aysan u dulqaadan doonin in Shabaab garsoor loo doonto.
Magaalada Afgooye oo ay ka dhaceen dilal qorshaysam.
Rag bastoolado ku hubeysan ayaa ku diley magaalooyinka Afgooye iyo Boosaaso askar iyo haweeney rayid ...